Xarun cusub oo dadka Dhimirka qaba looga furay magaalada Qardho
Qardho:-Waxaa maanta gelinkii danbe si rasmi ah loo furay xarun loogu talagalay dadka qaba dhimirka waxaan xaruntaan cusub laga furay magaalada Qardho ee xarunta Gobolka Karkaar, Xaruntaan ayaa waxaa dhismaheeda hirgeliyey Hay’adda Kheyriyaadka ah ee Al-Manhal waxaana gacanta ku hayay Eng C/qaadir Yaasiin Maxamed oo ah Culima,udiinka degaanka.
Dr Cabaas iyo Wafdi uu hogaaminaayo ayaa ka soo kacitimay dalka America si ay wax uga qabtaan dadka xanuunka dhimirka qaba, sidda ay sheegeen waxay xirirka Qadadka Internet-ka kala socondoonaan dadka xanuunsan iyo talo bixin iyo visit-ba ku shaqeyndoonaan marka ay ku laabtaan dalka America.
Dr Cabaas ayaa u suura gashay dadka qaba xanuunka Dhimidka kala yimi gobollada qaarkood iyo gudaha magaalada Qardho, kuwaasoo u qoray daawooyinka ku haboon iyo tallooyin sidii loola dhaqmi lahaa loona xanaaneyn laaha. Dr. Cabaas oo ka qeybgalay kulamo looga hadlaayay horumarinta caafimaadka degaanka iyo guud ahaan Mandaqada Puntland balan qaaday in haddii alle idmo uu karaankiisa ka howl geli doono sidii wax loogu qaban lahaa dadka qaba xanuunka Dhimirka, haddii ay ahaan lahayd dhinaca daawada iyo tallooyinka ku haboon la dhaqanka iyo xanaanada oo qeyb ka ah daawada la siinayo bukaanka,.
Waeys Aidarus Gure
Qardho Karkaar Region